‘डिभी परेको छ अमेरिका लैजान्छौं’ भन्दै कोपिला र अनिसाको यस्तो धन्दा – Naya Kura Daily
काठमाडौं । अमेरिकाको डिभी (डाइभरसिटी भिषा) को रिजल्ट केही समय अघि निस्काशन भएको छ । यहि मौकामा केही युवतीहरु भने यसैलाई आधार बनाएर ठगी धन्दामा लागेको खुलेको छ । ठगी गर्नेहरुका दाउ अनेक हुन्छन् ।
Prev‘छ माया छपक्कै’का निर्माताले अझै पाएनन् २ करोड शेयर
Next१० दिन कैद सजाय पाएका एकजना पक्राउ
पत्ता लाग्यो आन्टिको अर्कै नाठो! भतिजो लाई यसरी फसाएको रहस्य खुल्यो!! तुरुन्तै हेर्नुस: